Kuratidza zvinyorwa neelebheri Vitkovice
Musha weVítkovice, zvakare Vítkovice v Krkonoších (ChiGerman: Witkowitz), inowanikwa mudunhu reSemily, mudunhu reLiberec. Iyo iri muMakomo eGiant padivi pemupata weRwizi Jizerka. 386 vagari vanogara pano.
Chekutanga kunyorwa kutaurwa nezvemusha kubva kubva 1606. Muhafu yekutanga yezana ramakore rechigumi nemasere, magirazi emhuri yePreissler yemasimbi esimbi akashanda pano.
Mumakore 1938-1945, Vítkovice anonyanya kutaura chiGerman aive weNazi Germany. Pashure peHondo Yenyika yechipiri, vanhu vekutanga veGerman vakatamiswa pano uye huwandu hwevanhu hwakachinjaniswa. Kubva ipapo, dzimba dzemakomo dzemunharaunda dzave dzichishandiswa kunyanya kuita zvekunakidzwa.
Musi waApril 5, 2017, musha wakapihwa jasi remaoko uye mureza.
Musha uyu une imwe cadastral nharaunda (Vítkovice muGiant Mountain) uye haina kukamurwa muzvikamu zvemunharaunda. Musha weVítkovice pachawo unowanikwa nenzira yechipiri / 294 kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenzvimbo yeCadastral, nzvimbo yayo yekumadokero inonzi Horní Vítkovice, dzimwe nharaunda (kazhinji nzvimbo nharaunda dzakapararira) dzinonzi Levínek, Zákoutí, Janova Hora, Mevaldův Vrch, Skelné Hutě,…
Iko kushanda kwazvino kweGiant Mountain ski resorts